Tombony sy fanoherana ny fiompiana anaty rano-- | Green Renewable
Tombony sy fanoherana ny fiompiana ako-
Manoloana ny fampahantrana ny harena voajanahary an-dranomasina, maninona raha manantona fiompiana anaty rano? Ny ankamaroan'ny salmon amidy any Alemana dia avy amin'ny fiompiana anaty rano. Na izany aza, io fanao io dia misy fatiantoka lehibe, matetika ny mpamboly dia mampiasa zava-mahadomelina ary ny rano dia voaloton'ny fako biolojika. Na eo aza ny zava-drehetra dia resy lahatra ny manam-pahaizana sasany fa ny fambolena fiompiana anaty rano dia tsy fomba iray hiarovana ny ranomasina fotsiny, fa fomba iray hamelomana ny mponina ihany koa. MPONINA Mundial tsy mitsaha-mitombo.
2 Ny trondro iray amin'ny roa dia avy amin'ny fiompiana anaty rano
3 Fomba fanao iray izay voatsikera ny mpiaro ny tontolo iainana
Ao amin'ny sakafo olombelona, trondro no loharanon-karena lehibe indrindra manerantany, alohan'ny akoho amam-borona. Raha ny marina, androany dia mamela 17% ny olombelona hanarona ny filan-kevitry ny proteinina ao aminy. Ao anatin'ny 10 ka hatramin'ny 15 taona, hitombo avo roa heny ny fangatahana 2. Raha tsy misy ny fiompiana anaty rano, tsy afaka hamaly ny zavatra ilaina proteinina ny isan'ny mponina mitombo. Tombony betsaka tokoa ny fiompiana anaty rano noho ny fiompiana kisoa na omby, satria ny trondro sy ny zavamananaina an-dranomasina hafa dia manome sakafo kely noho ny trondro. biby tany.
Mamokatra iray kilao omby Ohatra, mila sakafo 15 heny mihoatra ny famoahana karipetra iray kilao. Ny trondro dia tena mandany angovo mihoatra ny trondro. biby tany, Ary izany dia misy antony roa. Amin'ny lafiny iray, biby mandatsa-drà izy ireo, ny mari-pana anatiny dia mifanaraka tsara amin'ny an'ny tontolo iainany. Ary etsy ankilany, ny fivelomana anaty tontolo anaty rano dia mitaky ezaka kely.
Ny trondro iray amin'ny roa dia avy amin'ny fiompiana anaty rano
Raha ny filazan'ny Fikambanana mikambana momba ny sakafo sy ny fambolena, ny antsasaky ny trondro tonga amin'ny takelaka misy antsika anio dia tsy trondro dia. Na izany aza, ny maha-zava-dehibe ny fiompiana anaty rano tsy mitovy amin'ny firenena. Any Eropa afovoany, toy ny any Alemana, ny trondro dia no tena tadiavina. Saingy, any Shina, ny fiompiana anaty rano dia fomban-drazana efa an'arivony taona nanomboka tamin'ny fiompiana trondro taloha. trano rantsan-kazo. Hatramin'izao dia tsy isalasalana fa i Shina no firenena voalohany ao amin'ity sampana ity, manome ny roa ampahatelon'ny famokarana trondro manerantany fiompiana anaty rano.
Fomba fanao iray izay voatsikera ny mpiaro ny tontolo iainana
Tahaka ny acuikolontsaina rehefa mivoatra izy dia miteraka fanakianana bebe kokoa hatrany avy amin'ireo mpiaro ny tontolo iainana, satria vao mainka nampitombo ny olan'ny fanjonoana tafahoatra fa tsy ny famahana azy. Eny tokoa, ny ankabeazan'ny karazan-javamaniry dia fihinanan-kena ary mihinana karazan-trondro hafa trondro Medio voajanahary. Ny fiompiana tuna anaty rano no tena mampidi-doza indrindra, satria tsy toy ny sômonôna, io karazany io dia tsy afaka miteraka amin'ny fahababoana. Ny tantsaha noho izany dia mahazo trondro tanora dia ary omena sakafo trondro lafo tratra tao anaty ranomasina. Voahidy ao anaty tranom-borona, tsy manana fotoana ahafahana miteraka intsony ny tunas.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » tontolo iainana » Fambolena ekolojika » Tombony sy fanoherana ny fiompiana ako-
Ny 80% -n'ny rano fantsakana ao Shina dia maloto loatra ka tsy azo sotroina
Nanambara ny tigra fa lany tamingana tany Kambodza